ဇာတ်လမ်းတွဲတွေ ရိုက်ကူးရင်း ထူးခြားတဲ့ ရုပ်ရည်နဲ့ သရုပ်ဆောင်ပိုင်းမှာ ထူးချွန်လွန်းတာကြောင့် ပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးနှစ်သက်ခြင်းကို အချိန်တိုအတွင်း ရရှိခဲ့တဲ့ မင်းသမီးချောလေး ခြူးလေးကတော့ သူမပါဝင်သရုပ်ဆောင်တဲ့ ဇာတ်ကားတိုင်းကို ကာရိုက်တာဝင်အောင် အကောင်းဆုံး သရုပ်ဆောင်တတ်သူတစ်ဦးပါ။ စကားပြောရင်လည်း ပွင့်လင်းတဲ့ ခြူးလေးကတော့ လတ်တလောမှာ မန္တလေးရောက်တုန်း မွေးစားအမေဆီ သွားလည်ခဲ့တဲ့ သူမရဲ့ပုံရိပ်တွေကို လူမှုကွန်ယက်မှာ ဝေမျှပေးထားတာ တွေ့ရပါတယ်။ မန္တလေးမှာ ပျော်နေတဲ့ ခြူးလေး​ကတော့ အရမ်းကို ချစ်ဖို့ကောင်းလွန်းပါတယ်နော်။
ချစ်ပရိသတ်တွေအတွက် မန္တလေးက မွေးစားအမေဆီ သွားလည်ခဲ့တဲ့ ခြူးလေးရဲ့ချစ်စရာပုံရိပ်တွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
ခြူးလေးကတော့ “မန္တလေး ရောက်ရင် မွေးစားအမေဆီ သွားမလည် ရရင်…. အမေချော ရဲ့ အညာမြေ ၂ မှာ ထမင်းသွားမစားရရင် အိပ်လို့ကိုမပျော်ဘူး ဟီး…. အမေချောရဲ့ သမီးလေးနဲ့လည်းတွေ့ခဲ့တယ်….ချစ်စရာ မီးမီးလေး….အားရပါးရ စားထားတဲ့ Video file လေးကိုတော့ မကြည့်ကြနဲ့နော်…. ဗိုက်ဆာ သွားမှာစိုးလို့ပါ 😋😜” ဆိုပြီး သူမရဲ့ မွေးစားအမေဆီ သွားလည်ခဲ့တဲ့ သူမရဲ့ပုံရိပ်တွေကို လူမှုကွန်ယက်မှာ ဝေမျှပေးထားတာပါ။
ခြူးလေးကတော့ လက်ရှိမှာ ဇာတ်လမ်းတွဲ အသစ်တွေလည်း ထပ်ရိုက်ကူးဖို့ရှိတယ်လို့ သိရပြီး ရုပ်ရှင်ကားတွေလည်း ရိုက်ကူးဖြစ်နေတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ချစ်ပရိသတ်တွေလည်း ဘယ်လိုနေနေ ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ ခြူးလေးကို ချစ်ရင် share သွားကြဖို့ မမေ့ပါနဲ့နော်။
ညီမလေးရဲ့အင်္ကျီသေးသေးလေးကိုဝတ်ထားပြီး အရမ်းချစ်ဖို့ကောင်း‌နေတဲ့ ကိုကို Peach Lay